WALIGAA MA IS LAHAYD INJIR AYAA FAAIDO YEELAN SHAMBOO LAGA SAMAYEEY CAYAYAANKA LOO YAQANO INJIRTA | Toggaherer's Weblog
HALKAN KA AKHRI MAGACYADA XUBNAA DIB U XORAYNTA UGA QAYB GALAYA BAARLAMAANKA IYAGA OO DHAMAYSTIRAN
Waxaa maalmahanba, ku soo badanayaa shabakadaha laga akhristo dalka sucuudiga, inaay jiraan dumar ka ganacasada Cayaayaanka loo yaqaan injirta iyada oo laga sameeyo shambooyin aay isticmalaan dumarka.
Gabadh ka mida kuwa ka ganacasada oo magaceda la yidhaahdo Jawaahir Nazeer ayaa Ku iibisa Caasimada dalka sucuudiga ee Riyaad shamboogan laga samayay Injirta. Qiimaha lagu kala iibsado xabada shamboogan ayaa ah 50 riyaal oo sucuudiga oo dhigantaa 13$ dollar.
Mar la waraaysatay Jawahiir ayaa waxaay ka warantay fa’iidooyika uu leyahaay shambogan laga sameeyo Injirta waxaanaay tidhi, shamboogan waxaa uu wanaajiya timaha waxaanu u sameeya midab wanagsan oo quruxbadan waxaanu soo ceeliya nafaqada timaha, timuhu ma daataan si dhakhsana waay u korisaaa.
Dumarka ku ganacasda iibka shamboogan ayaa ah qar ku takhsasuusay cilmiiga dhirta /dabeciiga.
Hadaba cayaayaanka Injirta oo ah wax keena xanuuno oo timaha ku dhasha markaa uu qofku uu joga meelaha ciid caska ayaa imika waxaa la ogadaayba inaay Injirtu lafteedu ledahaay faiidoyin farabadan taasina waxaay inoo cadeynaaysaa in caalamka waxkasta oo khasaare ah aay faiidoo leyihiin.
Xafiska Warqabadka Toggaherer